people Nepal » हङकङसँगको खेल रद्ध भएपछि …. हङकङसँगको खेल रद्ध भएपछि …. – people Nepal
हङकङसँगको खेल रद्ध भएपछि ….
३० असोज, काठमाडौं : विश्व क्रिकेट लिग (डब्लूसिएल) च्याम्पियनसिपमा हङकङ विरुद्ध खराब प्रदर्शन गरेपछि नेपाल डिभिजन टू मा झरेको छ ।
पहिलो खेल ८३ रनले गुमाएको नेपाल आजको खेल वर्षाका कारण रद्द भएसँगै घटुवा भएको हो । अब संयुक्त अरब इमिरेट्स (युइए) सँगको दुवै खेल जित्दा पनि नेपाल शीर्ष ४ मा नपर्ने भएपछि डिभिजन टू मा घटुवा भएको हो । डब्लूसिएलका शीर्ष ४ टोली विश्व कप छनोटमा पुग्नेछन् भने पुछारका ४ टोली डिभिजन २ मा झर्छन् ।
समुन्द्रिक आँधी र वर्षाका कारण आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल र हङकङबीचको आजको खेल रद्द भयो र दुवै टिमले एक एक अंक बाँडे । हङकङ १४ अंकसहित अंक तालिकाको चौंथो स्थानमा पुगेको छ । समान १२ खेलबाट ९ अंक जोडेको नेपाल छैटौं स्थानमा छ ।
अब नेपालले बाँकी दुवै खेल जितेमा पनि १३ अंक मात्रै हुनेछ । नेपालले अब फेबु्रअरिमा नामिबियामा हुने डिभिजन टूको शीर्ष दुईमा परे मात्र विश्वकप छनोट खेल्न पाउनेछ । डिभिजन टूमा नेपाल, नामिबिया र युएई सहित ६ टोली हुनेछन् ।